Abavelisi wocingo lwentsimbi base China kunye nabathengisi Isinyithi seShoufan
Ukudibanisa okushushu kukuntywila ngesisombululo esincibilikisiweyo. Isantya imveliso ngokukhawuleza, kwaye ukutyabeka zamafu. Ubuncinci bobukhulu bencindi ye-zinc evunyelwe yimakethi zii-microns ezingama-45, kwaye ubuninzi bunokuba ngaphezulu kwe-300 microns. Kumnyama ngombala, kudla i-zinc eninzi ...
Isefu Intsimbi yentsimbi kubandakanya i-electro galvanized wire kunye nocingo olushushu olushushu.
Zinc camera: 1. Electro kwalenza intsimbi kwalenza 15-20g / m2. 2. Hot sentsimbi kwalenza intsimbi yi 30-300g / m2
Ukudibanisa okushushukukuntywila kwisisombululo esincibilikisiweyo se-zinc. Isantya imveliso ngokukhawuleza, kwaye ukutyabeka zamafu. Ubuncinci bobukhulu bencindi ye-zinc evunyelwe yimakethi zii-microns ezingama-45, kwaye ubuninzi bunokuba ngaphezulu kwe-300 microns. Imnyama ngombala, itya i-zinc eninzi, yenza umaleko wokungena ngesinyithi, kwaye inokumelana kakuhle nokubola. Ukudibanisa okushushu kungagcinwa amashumi eminyaka kwiindawo zangaphandle.
Ukubumba okubandayo(i-galvanizing) yinkqubo apho i-zinc icothwe ngokuthe chu kubuso bentsimbi kwindawo yokuhlamba. Isantya semveliso sicotha, ukutyabeka kuyalingana, kwaye ubukhulu bunciphile, zihlala ziyi-3-15 microns kuphela. Ngokunxulumene nokudibanisa okushushu, ixabiso lokuvelisa i-electro-galvanizing liphantsi.
Izinto eziphathekayo: umgangatho ophezulu we-carbon carbon wire Q195
phawu: ubhetyebhetye obugqwesileyo kunye nokuthamba
Umgangatho we-zinc: 15g-250g / ㎡
eqine amandla: 30kg-70kg / ㎡
Umgangatho wobude: 10% -25%
ubunzima / coil: 0.1kg-800kg / coil
Umgangatho omiselweyo: BWG34 – BWG4 eyi-0.20mm – 4.0mm
Ubunzima bekhoyili: Ikhoyili yocingo ehlanganisiweyo inokuhlangabezana neemfuno zabathengi, iikhoyili ezincinci nezinkulu ziyafumaneka.
Injongo: ubukhulu becala kulwakhiwo, ukuluka umnatha, iibrashi, izixhobo zonxibelelwano, izixhobo zonyango kunye neentambo, iifilitha, umbhobho woxinzelelo oluphezulu, imisebenzi yezandla, kunye nezinye iinkalo
Iimpawu kunye nokusetyenziswa: Ukwaleka okuphezulu kweZinc kunye nokumelana nokubola okukhulu, ukuqiniswa kunye nokulungelelaniswa kakuhle kweZinc Coating, umphezulu omtyibilizi, osetyenziselwa ukuluka umnatha wocingo kunye nokwenza kwakhona, okusetyenziswa kakhulu kushishino, ezolimo kunye nokuzala kwemfuyo.
Iphakheji: I-0.3-1000kg ziyafumaneka, ukupakisha kwangaphakathi ngemigca ye-PVC, ukupakisha kwangaphandle ngelaphu le-hessian okanye ingxowa yenayiloni ngaphandle.
Amandla eqine kunye nendlela yokubala yocingo olwenziweyo
Indawo enqamlezileyo yocingo = m2 * 0.7854 mm2
Intambo yokuqhawuka kwengcingo iNewton (N) / indawo enqamlezileyo mm2 = amandla MPA
Ishumi elinesihlanu #
Olunye ubungakanani nalo lunokwenziwa njengemfuneko yakho.
Egqithileyo Iintsontelo zentsimbi ezixineneyo
Okulandelayo: Intambo yentsimbi kwalenza
Iintsontelo zentsimbi ezixineneyo